Ezigbo turquoise / Blue / hydrated phosphate ọla kọpa aluminum / Video
Ezigbo turquoise bụ opaque, blue to green mineral. Ọ bụ phosphate hydrated nke ọla kọpa na aluminom. na usoro ọgwụ nke CuAl6 (PO4) 4 (OH) 8 · 4H2O. Turquoise dị ụkọ ma baa uru na akara ugo. A na-ewere ya dị ka nnukwu nkume. Na nkume ịchọ mma maka ọtụtụ puku afọ. N'ihi na ya na-acha anụnụ anụnụ hue. N'oge na-adịbeghị anya, a gbafuola ya. Dị ka ọtụtụ ihe ndị ọzọ bara uru. Site na iwebata na ahịa nke ọgwụgwọ, nakwa imitations na synthetics.
Ihe kacha mma nke turquoise ruru oke ike nke Mohs n'okpuru 6. Obere ihe karịa window iko. Ọ bụ ihe na-egosi na ịnweta crysttocrystalline. Turquoise fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị kristal dị iche iche. Na ihe niile nke ihe onwunwe ya dịkwa oke agbanwe. Ngosipụta ntanetị X-ray na-egosi usoro kristal ya iji ghọọ aghụghọ. Mbelata ike na-abịa 2.60-2.90 dị arọ. Na oke porosity, ihe ndị a dabere na nha ọka. The luster bụkarị waxy ka subvitreous. Na nghọta ya na-abụkarị opaque. Ma enwere ike ịmegharị na ngalaba dị mkpa. Agba dị ka agbanwe dị ka ihe ndị ọzọ ịnweta. Na-eche site na ọcha ka ntụ ntụ acha anụnụ anụnụ na mbara igwe na-acha anụnụ anụnụ. Site kwa na akwukwo ndu na-acha odo odo. A na-acha anụnụ anụnụ si ọla kọpa. Ọ bụ ezie na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nwere ike ịbụ ntụgharị nke ma ọ bụ ígwè dị ọcha, dochie aluminom, ma ọ bụ mmiri agwụ.
Ihe ntụgharị nke turquoise bụ ihe dịka 1.61 ma ọ bụ 1.62. Nke a bụ ihe dị oké ọnụ ahịa a hụrụ dị ka otu mkpụrụ akwụkwọ na refractometer gemological. Ọ bụ n'ihi ụdị nkume polycrystalline fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke a na-emekarị. A na-agụ 1.61-1.65, yana 0.040 birefringence. Ihe na-esi na Biaxial pụta site na obere kristal. A pụkwara inweta ụdị ihe ntanetịpụ nke nwere ntanye anya. Ọ na-ekpughe otu akara na 432 nm ma nweekwa ike na 460 nm. N'okpuru ìhè ultraviolet ogologo oge, ọ nwere ike na-eme ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-acha odo odo, ma ọ bụ na-acha anụnụ anụnụ, ọ bụ inert n'okpuru ultraviolet na ụzarị X.
Turquoise, site USA
zụta ezi turquoise na ụlọ ahịa anyị